अन्तिम बुद्धबाणी – ‘अप्पो दिप्पो भव’ आफ्नो प्रकाश आफैं बन – Halkhabar kura
२२ माघ २०७६, बुधबार २२:०८
अन्तिम बुद्धबाणी – ‘अप्पो दिप्पो भव’ आफ्नो प्रकाश आफैं बन
भगवान बुद्धले अन्तिम वचनका रुपमा हामी माझ यही वाणी छाडेर गए, ‘अप्पो दिप्पो भव ।’ अर्थ: आफ्नो प्रकाश आफैं बन ।’ यही वाणीभित्र सारा जीवन छ । हाम्रा बा–हजुरबाले पनि यस्तै कुरा हामीमाझ भनिरहनुहुन्छ नि । ‘आफ्ना खुट्टामा आफैं उभ’, ‘उचालेको कुकुरले मृग मार्दैन ।’ तर हामीले अग्रजहरुका भनाइ र ती भनाइभित्र रहेको जीवन दर्शनलाई ख्याल नै गर्दैनौं । बुद्धको अन्तिम वचन ‘अप्पो दिप्पो भव’ को भावलाई बुझेर जीवनमा लागू गर्ने हो भने एक सफल जीवन निर्वाह गर्न पक्कै सहज हुन्छ ।
दियो बल्न चार चीज आवश्यक छ । दियो, बर्तन, बाती र सलाई (आगो) । यसरी नै जीवन प्रकाशमय बनाउन पनि चारै कुरा आवश्यक छ । प्रकाशमय जीवन भएपछि हाम्रो जीवनमा आनन्दको मूल फूट्छ । आनन्दको कुरा अनुभूति मात्र गर्न सकिने साधकहरु, सन्त, महात्माहरुले बताएका छन् । महान व्यक्तिहरु माझ हामी किन झुक्छौं ? किन आकर्षित हुन्छौं ? किन उनीहरुको अनुसरण गर्छौं ? संसारका सात अर्ब मानिस एक सयको हाराहारीका महान् व्यक्तिहरुको पछाडि किन छन् ? जवाफ आफैं खोजौं । सयमा एक थप्ने भए आफ्नो प्रकाश आफैं बन्नु नै पर्छ ।
अन्त्यमा बुद्धको महानवाणी ‘अप्पो दिप्पो भव’ भन्दै आनन्द सुशीलको पुस्तक जीवनपथबाट एक भनाइ छ , ‘जीवन त हामी आफ्नै प्रयासबाट जिउदछौं, अरुका काधबाट त केवल मसानघाटको यात्रा गर्छौ ।’
फागुन पूर्णिमा र बुद्धको राजगृह प्रवेश दिवस – अनुवाद बिष्णु धनञ्जय
अतुलनीय भगवान बुद्धको समय कालमा राजगृह वेलुवनमा विहार लिनुभएर अङ्ग र मगध प्रदेशमा दायक दायिकाहरुलाई धर्मको रसपान गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यस समाचारलाई पिता शुद्धोधन राजाले सुनेर थाहा पाए पछि छोरा भगवानलाई भेटेर दर्शन गर्ने साह्रै इच्छुक हुनुहुन्थ्यो । त्यसकारण एउटा अमात्यलाई एक हजार प्रतिवेश अंगरक्षक तयारी साथ पठाउनु भयो।
यो खन्ध चाहिँ पानीको फिँज (फोका) तुल्यउपमेय समय ढिला नगरिकन बिग्रिएर जाने क्षणभङ्गूर सार नभएको नक्कलि मात्र हो। भनेर आदि राम्रो संग बुझेर जानेको व्यक्ति चाहिँ ! मारदेव (मृत्यु) राजको फूल तुलनीय समान भएको संसार वट्ट दुःख हरु लाई अरहत्त मार्गज्ञान लाग्ने तरवार (कृपण) द्वारा काटेर मृत्यु राजले नदेख्ने ठाउँ भएको निर्वाण मा पुग्नु पर्दछ। भगवान बुद्धले पिता सुद्धोधन लाई उपकारको गुण हेतु ऋण भार चुक्ता गर्नु भएको दिन हो। सबैको मंगल होस्
Previous माघ २२ गते बुधबार फेब्रुवरी ५ तारीखको रा’शिफल, श्रीगणेश भगवानले सबैको कल्याण गरुन
Next हेर्नुहोस आज माघ २३ गते बिहीबार फेब्रुवरी ६ तारीखको रा’शिफल